Ụdị Laptọọpụ kacha mma nke 2022. Kedu ihe kacha nwee ntụkwasị obi?
N'ihi nhọrọ dịgasị iche iche na-ejupụta ahịa ngwa eletrọnịkị, Ịmara nke kacha mma akara laptọọpụ na nke kacha mma maka mkpa gị nwere ike na-abụkarị ihe ịma aka.
Ọ bụrụ na ị bụ ọkachamara ma ọ bụ nwa akwụkwọ, smartphones na mbadamba nwere ike ịba uru ịkwagharị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịfụgharị ịntanetị, mana Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ ịrụ ụfọdụ mgbagwoju anya na ọrụ siri ike, laptọọpụ ga-adị mkpa maka gị
Hụ ndepụta ụdị laptọọpụ kacha mma
1.1 Lenovo ọ bụ ezigbo akara?
1.4 Echiche E14
2.1 Akwụkwọ Zenbook
2.3 asus ZenBook tụgharịa
3.1 Gbanyụọ 14 HP
4.2 Oge a 14
4.3 GE66 Onye na-agba ịnyịnya
4.4 MSI ọ bụ ezigbo akara laptop? Echiche
5.1 Apple MacBook Ikuku - 13 inch
5.2 Apple MacBook Pro - 13 inch
5.3 Apple MacBook Pro 16 anụ ọhịa
8 Ibu Microsoft
11.3 DNN Latitude 5450
13 Kedu ụdị ụdị laptọọpụ kacha mma?
13.1 Kacha mma maka imewe
13.2 Ụdị kacha mma maka ụmụ akwụkwọ
13.3 Ụdị nke kọmputa na-arụ ọrụ
13.4 Ụdị laptọọpụ inch 13 kacha elu
13.5 Nke kacha mma 15 sentimita asatọ
13.6 Laptọọpụ kacha mma igwu egwu
13.7 Ụdị nwere laptọọpụ inch 17
13.8 Kachasị mma nwere laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe
13.9 Ụdị laptọọpụ kachasị ntụkwasị obi
13.10 Ụdị laptọọpụ ndị China
N'ihi ya, taa anyị na-ewetara gị a depụta na ụdị laptọọpụ kacha mma. Iji zụlite ya, anyị adaberela n'onwe anyị na ọkwa nke ụdị laptọọpụ, na nhazi, enyemaka aka ọrụ, ihuenyo, ọdịyo, nhazi na, n'ezie, echiche onye ọrụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ n'ọdịnihu dị nso, anyị na-akwado ka ị lelee ndepụta nke ị ga-ahụ n'okpuru ebe anyị chịkọtara ụdị kpakpando nke ndị na-emepụta laptọọpụ bụ isi.
Lenovo agbagokwala chaatị ahịa na ọ bụ onye nrụpụta laptọọpụ ọzọ a ma ama nke ukwuu. N'ezie ọ bụ otu n'ime ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya kemgbe na-ere ọtụtụ laptọọpụ na ọnụ ahịa dị iche iche.
Otú ọ dị, nke a abụghị nanị àgwà ọma ya, ebe ọ bụ na Nkwado Lenovo bụ ọkwa kachasị eluỌ nweghị nha nha, nke a na-enye ya nnukwu uru karịa ụdị ndị ọzọ na-ewu ewu.
Ihe kacha otuto nke ụdị nyere site Lenovo bụ oghere igodo sara mbara na udi igodo agbagọ na nnukwu ọdịyo na ihe onyonyoyana obere arọ ya na imewe dị oke mkpagharị.
Lelee azụmahịa taa na laptọọpụ Lenovo
Lenovo ọ bụ ezigbo akara?
Lenovo bụ ugbu a Akara Laptọọpụ kacha ere n'ụwa niile. Ọ bụ ụlọ ọrụ jisiri ike na-eto ngwa ngwa n'ahịa mba ụwa. N'ihi ụdị dị iche iche nke laptọọpụ na ọnụ ahịa dị mma, ha achọtala ebe n'ụdị mba niile, gụnyere Spain.
Ọ bụ akara dị mma? N'ezie ọ bụ. Ha nwere ụdị kọmpụta dị iche iche, yabụ enwere ụdị onye ọrụ niile, nke bụ n'ezie ihe dị mkpa na nke a. Ma ị na-achọ laptọọpụ ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ otu maka egwuregwu, ọ ga-ekwe omume ịchọta ihe na katalọgụ ha, nke na-eme ka ha na-eburu ha n'uche mgbe niile.
Chọpụta nke kacha mma Laptọọpụ Lenovo nke ị nwere ike ịzụta na ire ere.
Laptọọpụ ha dị mma, na àgwà nkọwa nke na-egbo ihe ndị ọrụ chọrọ ma na-achọ taa. Yabụ na n'echiche a enweghị mkpesa maka ụlọ ọrụ ahụ. Na mgbakwunye, ị ga-eburu n'uche na laptọọpụ ha nwere ọnụ ahịa dị mma n'ozuzu ya, nke mere na ọ ga-ekwe omume ịchọta ihe na-adọrọ mmasị, na-enweghị akwụ ụgwọ maka ha.
Lelee nyocha anyị zuru ezu nke laptọọpụ Lenovo
Ụdị Lenovo kacha mma bụ:
Ọ bụ otu n'ime kọmpụta kachasị dị na ahịa, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo enyi njem. Dị ka aha ya na-egosi, laptọọpụ a nwere mgbanaka nke na-enye ohere idobe ihuenyo ya n'ọtụtụ akụkụ nlele, ọ pụkwara ịghọ mbadamba.
Ọ bụ ngwa dị fechaa nke dị mma maka ntụrụndụ ekele maka ndị na-ekwu okwu Harman Kardon na ihuenyo mmetụ HD zuru oke, ma na-agba ume.
Ụdị laptọọpụ Lenovo a bụ otu n'ime nhọrọ ntinye kachasị mma maka ndị na-achọ kọmputa dị ike mana na-enweghị ọnụ ahịa ya. Ejiri ya na Intel Core i7 processor na ihuenyo ya dị sentimita 14, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke maka ọrụ mgbasa ozi ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ egwuregwu dị mfe. Kọmputa a 14 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ Ọ bụ otu n'ime ihe kpatara Lenovo ji nọrọ na ndepụta ụlọ ọrụ na-eme kọmpụta kacha mma.
Dị ka ị hụla, ọnụ ahịa mbibi ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ nke anyị agaghị achọta na ụdị ndị ọzọ. Ọnụ ego-mma oke enweghị ike imeri.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka laptọọpụ rụọ ọrụ ma ị chọghị ka ahapụ ya ka ọ kwụgidere n'oge kacha njọ, anyị na-akwado ka ịzụtara ihe nlereanya a dị elu site na Lenovo.
Ọ nwere Quad Core i5 processor dị ike ma dabara adaba maka ngwa 3D na CAD. Ngwá ọrụ ọrụ a dị ike dị njikere ịga ebe ọ bụla. Laptọọpụ nke afọ gara aga mana nwere ngwaike ọhụrụ nke ga-anọru gị ọtụtụ afọ.
Lenovo ThinkPad E14 -…
Kedu ihe bụ echiche Lenovo n'etiti ndị ọrụ? N'ozuzu, nlebanya ahụ dị ezigbo mma ebe ọ bụ na ha na-edobe oke ọnụ ahịa dị mma nke ukwuu. Obi abụọ adịghị ya, ha bụ nhọrọ dị mma iji tụlee.
Hụ nyocha ndị ọzọ Lenovo laptọọpụ na Amazon
Hụ azụmahịa taa na laptọọpụ Asus
Ọ dị nso na Lenovo anyị na-ahụ ASUS. Ụdị ika a jisiri ike pụta ìhè atụmatụ ha mara mma, nkwado nka na-enweghị atụ, yana draịva ime ka ọ dị ọhụrụ. Maka ebumnuche ndị a niile, ASUS enwetala ọtụtụ echiche dị mma n'aka ndị ahịa ya.
Ọ bụ ụlọ ọrụ dị njikere itinye ihe egwu na, ya mere, malite ụdị nke oké osimiri nke okike.
Es ika ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ ma ọ bụ ngwakọ. Otú ọ dị, ị kwesịrị iburu n'uche na naanị na ụdị ya dị elu, igodo ahụ na-eguzogide ọgwụ na ihe oyiyi dị ebube.
Ụfọdụ n'ime kọmputa kacha mma Asus laptọọpụ nwa:
Anyị na-eche ihu ụdị ọhụrụ nke ika ahụ, ngwaọrụ a mụrụ na ebumnuche nke asọmpi MacBook Pro. Ọ bụ akwụkwọ ndetu mara mma, nke ihuenyo inch 14, nke yiri Apple's Retina, na-enye onyonyo na-egbuke egbuke ma dịkwa nkọ.
Ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma maka ndị na-achọ ịma mma na ike na laptọọpụ ha.
A na-elekarị ya anya dị ka ngwa egwuregwu, ya mere ọ dị mma maka ndị na-achọ igwe mkpanaka na multimedia dị mma.
ASUS VivoBook tụgharịa 14 ...
N'ịbụ nke a kwadebere nke ọma na ihe nrụpụta Intel Core i3 nke ọgbara ọhụrụ, ihe ngosi 14-inch LED-backlit mara mma, eserese Nvidia, na ndị na-ekwu okwu quad, laptọọpụ a na-etu ọnụ ahịa ọla ọcha gradient ya dị mma nke na-eṅomi aluminum.
Nke a bụ akwụkwọ ndetu siri ike na ekele maka ihuenyo hinged nwere ike ịghọ mbadamba nkume dị ike, niile n'otu. Ọ nwere ọtụtụ nhazi ngwaike, ọ bụ ezie na akụkụ kachasị mkpa nke ihuenyo 13.3-inch dị egwu, Intel Core i7 processor, 512 GB SSD na 16GB nke RAM.
Ọ bụrụ na ị naghị eburu ọnụ ahịa ya n'uche, ọ bụ ihe kacha mma Windows 10 ngwakọ mbadamba mbadamba na ahịa.
Ị nwere ike ịchọta Asus brand laptọọpụ gini ka ayi tunyere na ịpị ebe a.
Asus ma ọ bụ Lenovo? Ọ bụrụ na ị ruru ebe a ma ị maghị nke n'ime ụdị laptọọpụ abụọ ị ga-ahọrọ, anyị na-emesi gị obi ike na ị gaghị akwa ụta nke ọ bụla n'ime ha. Asus nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ire ngwaahịa ebe Lenovo ahụla mmụba dị egwu n'ịdị mma ngwaahịa nke butere ya ozugbo n'elu ndepụta ụdị laptọọpụ kacha mma.
Lelee nyocha anyị zuru ezu nke laptọọpụ Asus
HP ewulitela aha ya kemgbe ọtụtụ afọ wee bụrụ akara a na-achọsi ike site n'aka ndị ọrụ chọrọ ịzụrụ kọmpụta dị mma. Ndị ọrụ na-ahụ n'anya okirikiri nhọrọ ukwuu na ntụsara ahụ nke ahụigodo ha..
N'agbanyeghị inwe a ọkọlọtọ oru ọrụ, ọ bụ a ika ị nwere ike ịtụkwasị obi n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-enye ọrụ na-ere ahịa n'ebe ahụ.
Ụfọdụ ụdị akwụkwọ ndetu HP kacha mma bụ:
Hụ azụmahịa taa na akwụkwọ ndetu HP
Gbanyụọ 14 HP
Nke a ewepụtara ọnụ ala dị ala na nso nso a Windows 10 laptọọpụ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ otu n'ime ndị ahụ ọnụ ala laptọọpụ ma kwadebere na ọhụrụ ozi ọma. Ọ bụ laptọọpụ na-arụ ọrụ ekele maka quad-core Intel Core i5 processor ma nwee 8GB nke RAM. Ọ nwekwara ebe nchekwa arụnyere 512 GB SSD ọ bụ ezie na ọ dị na nchekwa karịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Otu ihe dị mfe mere ị ga-eji hụ laptọọpụ a n'anya bụ na ọ bụ ngwaọrụ abụọ n'ime otu. Ị nwere ike iji ya dị ka mbadamba nkume ma ọ bụ dịka laptọọpụ na, ya mere, ọ bụ ihe dị mkpa maka ndị na-achọ laptọọpụ mara mma nke na-arụ ọrụ maka ihe niile. Na mgbakwunye, ọ dịkwa mma maka ndị ọkachamara, ebe ọ bụ na ndụ batrị ya nwere ike ịdịru ruo awa asaa. Ejiri ngwaọrụ a nwere Intel Core i5 processor, 8GB nke RAM, ihuenyo mmetụ aka FULLHD nwere nnukwu njupụta nke. ntụpọ kwa inch na ahụigodo dị mma.
Hụ nlebanya anyị n'uju nke laptọọpụ HP
Hụ ahịa taa na laptọọpụ MSI
MSI na-anọchi anya Micro-Star International, ọ bụkwa ụlọ ọrụ Taiwan na-arụpụta ma na-ere ihe teknụzụ. N'ime ha anyị nwere ndị metụtara mgbakọ, dị ka PC peripherals, motherboards, graphic kaadị na ụdị nile nke kọmputa, dị ka desktọọpụ ma ọ bụ ụlọ elu, niile na otu ma ọ bụ AIO ma ọ bụ laptọọpụ. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịchọta ụfọdụ ndị na-adịghị, laptọọpụ MSI na-abụkarị otu lekwasịrị anya na egwuregwu, nke na-apụtakarị na ha dị ike ma na-eguzogide ọgwụ.
Na e mere kọmputa ndị a maka ndị na-egwu egwuregwu pụtakwara na ha nwere atụmatụ ike ike karị karịa kọmputa emebere ka ọ rụọ ọrụ, nke gụnyere ụdị na agba. Ọtụtụ n'ime kọmputa MSI gụnyere ọkụ RGB, ụfọdụ n'ime ha nwere igodo mmemme nke ga-eme ka mmegharị anyị dịkwuo mma. Ụfọdụ n'ime MSI kacha amasị taa bụ ndị a:
MSI's GF63 bụ laptọọpụ egwuregwu slim nke na-akwụghị ọtọ. A na-akwụ ya ọnụ ahịa dị elu karịa kọmpụta maka ọrụ, mana nke a ekwesịghị iju anyị anya ma anyị na-ekwu maka laptọọpụ a ga-egwu nke gụnyere ihe ndị dị elu karị, dị ka. i7 processor site na Intel, 16GB nke RAM ma ọ bụ ihuenyo 15.6-inch FullHD bụ nke kacha nta maka kọmputa egwuregwu ọ bụla bara uru nnu ya.
Ebe ọ na-apụta ntakịrị ihe na ebe nchekwa nchekwa, ihe niile 1TB na SSD nke na-emesi anyị obi ike ihe abụọ: ihe niile anyị chọrọ ịgụ ma ọ bụ dee ga-eme ya na oke ọsọ ma anyị nwere ike ịchekwa ọtụtụ egwuregwu kachasị njọ. Ihe dị ịrịba ama bụ kaadị eserese ya, 1650GB NVIDIA GTX4.
GF63 nwere isi ihe abụọ ọzọ ị ga-eburu n'uche: nke mbụ bụ na keyboard ya na-achagharị azụ, ma na-acha uhie uhie, ọ bụghị na agba dị iche iche dị ka ndị egwuregwu na-achọsi ike dị ka ya. N'aka nke ọzọ, ọ na-abịa enweghị sistemụ arụmọrụ, nke na-enyere aka ọnụahịa, ọ bụ ezie na ọ dị elu, dị ala site n'ịkwụghị ụgwọ ikike kwekọrọ.
Oge a 14
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe yiri ụdị nke gara aga, mana yana imewe dị oke njọ yana dị mfe ibufe, ị nwere ike ịmasị ihe dị ka Modern 14 sitere na MSI. Ihuenyo ya bụkwa FullHD, mana nke laptọọpụ a bụ 14 sentimita. O nwere otu Intel i7 processor, otu 16GB nke RAM na otu 1TB na nchekwa SSD nke ga-enye anyị ohere ịme ọtụtụ aha n'enweghị nsogbu, yana ịchekwa ọtụtụ egwuregwu na diski ike.
Ọ dị mkpa ikwu banyere sistemụ arụmọrụ, ebe ọ bụ na ihe nlereanya a adịghị agụnye ya, nke na-eme ka ọnụahịa dị ntakịrị ala maka ịghara ịkwụ ụgwọ ikike, ma na anyị ga-etinye otu tupu anyị enwee ike ime ihe ọ bụla. Nke ahụigodo nwere azụ azụ, ma na nke a na ìhè na-acha ọcha, nke, yana agba ntụ ntụ, na-enye ya ihe oyiyi dị nro nke ga-adị mma na ọnọdụ ọ bụla, gụnyere ụlọ ọrụ. Kaadị eserese nke 14 ọgbara ọhụrụ a na-eji bụ 350GB NVIDIA GeForce MX2.
GE66 Onye na-agba ịnyịnya
Ọ bụrụ na ị na-ewere onwe gị dị ka ezigbo onye egwuregwu, ihe ịchọrọ bụ laptọọpụ egwuregwu dị ike karị dị ka GE66 Raider. Na ihuenyo anyị agaghị achọpụta nnukwu ọdịiche n'ihe gbasara abụọ gara aga, ebe ọ na-ebugo 15.6-inch FullHD, mana n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ọzọ ọ dị elu. A na-edobe diski ike na 1TB SSD nke ga-enye anyị ohere ịchekwa ọtụtụ egwuregwu, gụnyere ndị dị arọ, mana GE66 Raider a na-eji ihe nhazi. Intel i9, nke bụ oge kachasị mma maka egwuregwu.
Ọ bụrụ na enwebeghị mmasị gị na processor, ikekwe nkọwa abụọ ọzọ ga-: 32GB Ram ma ọ bụ 2070GB RTX8 kaadị eserese nke, zụtara iche, dịlarị gburugburu € 500. Ma ọ bụrụ na ị ka na-ekpebighị, ikekwe imewe nke akwụkwọ ndetu ga-eme ka ị kwenye, ma ọ bụ karịa kpọmkwem backlighting nke keyboard ya na agba dị iche iche.
GE66 Raider na-agụnye sistemụ arụmọrụ, na nke a Windows 10 Home, ma a na-egosi ọnụ ahịa ya naanị maka ndị na-egwu egwuregwu n'ezie, na ọbụna karịa ma ọ bụrụ na ịhọrọ ihe nlereanya na 64GB nke RAM na 2TB SSD nke diski ike nke ọ dịkwa.
MSI ọ bụ ezigbo akara laptop? Echiche
Naanị ee. Ụfọdụ, gụnyere onwe m, ga-asị na ọ bụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kasị mma, otu n'ime ndị kasị mma. Ma buru n'uche na ọ bụ ika na-emepụta laptọọpụ egwuregwu, yabụ mgbe anyị zụrụ otu anyị ga-azụta ihe nwere akụrụngwa dị elu nke ga-enwe ọnụ ahịa dị elu karịa nkezi na nke mgbe ụfọdụ ga-agafe € 2000 ma ọ bụ ọbụna € 3000.
Ma akụkụ a abụghị ikwu okwu banyere ma ha dị ọnụ ala ma ọ bụ karịa ọnụ, ma ka mma ma ọ bụ njọ. Ọ bụ ezie na-ahapụghị ọnụ ahịa kpamkpam, anyị nwere ike iji MSI tụnyere kọmputa Apple. A MacBook Pro nwere ike nke kacha mma MSI bụ ọbụna karịa ọnụ na-agaghị enyere anyị aka igwu egwu, ebe ọ bụ Ọ bụghị egwuregwu niile dị maka macOS. Ọ bụrụ na anyị chọrọ igwu egwu ihe niile, anyị ga-achọ PC Windows, na MSI dakọtara na sistemụ arụmọrụ Microsoft.
Na-ekwu maka ike, MSI anaghị arụpụta pụrụ iche akụrụngwa, ọ bụghịkwa ihe na-esighị ike. Ihe ika a na-arụpụta ma na-ere bụ ihe niile na-eguzogide ma nwee ihe ndị dị n'elu nkezi, dị ka Intel i7 processors, 16GB RAM na nnukwu draịva siri ike na SSD, nke na-enye ha ọsọ ọsọ. Ụfọdụ mgbasa ozi pụrụ iche na-ekwu na ụfọdụ ASUS ma ọ bụ ACER laptọọpụ egwuregwu na-abịa kpuchie otu MSI, mana nke ahụ bụ arụmụka. Dị ka ika, MSI na-ewu ewu karịa n'etiti ndị na-egwu egwuregwu, na ama ama kwesịrị ekwesị.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ laptọọpụ egwuregwu, atụla egwu na MSI abụghị ụdị ama ama dị ka Apple, HP ma ọ bụ ACER; Laptọọpụ ụlọ ọrụ Taiwan dị mma karịa n'ụzọ ọ bụla.
Lelee nlebanya anyị zuru ezu nke laptọọpụ MSI
Apụl, ndị ọrụ laptọọpụ ewerela ya dị ka akara laptọọpụ kacha mma n'ime afọ ise gara aga A kwadoro nke a site na ịdị elu nke ngwaọrụ ha na ụkpụrụ ha dị elu.
Ọ bụrụ na ị nweela onwe gị obi ụtọ site n'ịgụ nkọwa ndị ọrụ gbasara ika a, n'ezie enwere okwu ọjọọ ole na ole ị chọtara. Nhazi, ahụigodo, ngosi na ọdịyo bụ ndị ọrụ gị niile chọrọ Na icing na achicha ahụ bụ nkwado teknụzụ na-enweghị atụ. A na-enwe mkparịta ụka gbasara ya mgbe niile.
Ka na-enwe obi abụọ? Chọpụta ndị bụ laptọọpụ nwere mma ọnụahịa ka mma.
Na ndabere na ị nwere ike ịzụta otu n'ime ha laptọọpụ, anyị na-emesi gị obi ike na kọmputa nke a ika ha dabara maka ihe ọ bụla ebumnuche gị bụ, ma ị chọrọ iji ya na-amụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na-achọrọ nnukwu mmemme.
Ọzọ, anyị ga-abanye n'ime nkọwa zuru ezu ụfọdụ ụdị kacha mma si nso nke apple laptọọpụ:
Apple MacBook Ikuku - 13 inch
Ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya ghọrọ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ nwere mkpa dị mfe ekele maka obere mbelata ọnụahịa na mmụba na njirimara ya. Mpempe mkpịsị aka ya Multi-Touch bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ndepụta a nke ụdị kọmpụta kacha mma yana nnwere onwe ya ruru awa iri na abụọ na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ siri ike ịkụ aka.
Ụdị 2021 bụ nkwalite sitere na MacBook Air 2016 yana arụmọrụ ya ka mma. Na mgbakwunye, ndụ batrị nke ihe nlereanya a bụ otu n'ime ihe kachasị mma ị nwere ike nweta n'ahịa. Na nchịkọta, anyị ga-ekweta na nke a bụ otu n'ime kọmpụta kachasị baa uru nke enwere ike ịzụta yana ekele maka draịvụ ike SSD ya, oge mmeghe nke ngwa ndị ahụ na-adị ngwa ngwa.
Nwee ume ọhụrụ na 2021 iji weta ngwaike gị nke ọma, MacBook Pro bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndụ batrị ya, CPU ngwa ngwa, ihe ngosi Retina na-adọrọ adọrọ na nnukwu keyboard, ha emeela ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
Ọnụ ego ezi uche dị na ya nyekwara aka n'ọnọdụ ya na chaatị ndị ahụ. Dị ka ika ahụ na-ekwu, ihe nrụpụta ya dị gịrịgịrị na ihuenyo dị elu na-anọchi anya nnukwu mmụba n'ịdị mma. Ọ bụrụ maka gị ụdị inch 13 dị obere, mbipụta 15-inch nwere njirimara ka mma dịkwa n'agbanyeghị na ọnụahịa ya na-ebili nke ukwuu.
Apple MacBook Pro 16 anụ ọhịa
Kpachara anya, ihe nlereanya a bụ ihe ndị niile chọrọ nha ihuenyo buru ibu ma ọ bụ ike na ndị hụrụ Apple n'anya. Ọ bụ nnọchi maka 15-inch MacBook Pro mana ọ nwere nnukwu slimmer na kọmpat karịa.
Ọ bụ ezigbo enyi njem n'ihi ọmarịcha atụmatụ ya: chassis aluminom ultra-slim, ihe nkwụ na-enweghị atụ na ndụ batrị ogologo oge Apple. Ogo ya na-eme ka ọ dị mma ibufe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla.
Onwe ya, Anyị na-ewere Apple dị ka otu n'ime ụdị laptọọpụ kacha mma n'ihi n'ichepụta àgwà nke ngwaahịa ya, nnwere onwe na nhazi dị ala nke sistemụ arụmọrụ ya chọrọ, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji tụlee ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ na ya.
Hụ echiche anyị banyere laptọọpụ Apple
Tinyere HP, Dell, Lenovo na ASUS, Acer bụ ụdị ọzọ nke kọmpụta akwụkwọ ndetu, ọ bụghị naanị n'ọnụ ahịa ahịa, kamakwa n'ime. àgwà na arụmọrụ nke ụdị ha. Ndị ọzọ nke nnukwu ndị nkesa nwere ezigbo echiche sitere n'aka ndị ahịa ha, ọkachasị ogo ya / ọnụahịa ya.
Otu n'ime ndị mbụ uru nke Acer laptọọpụ bụ ọnụ ahịa ya, ebe ọ bụ na ha na-enye gị ohere ịnweta igwe dị mma na ọnụ ahịa ọnụ ala. Ọrụ ndị ahịa ha dịkwa oke mma, yana ikike ha na-enye teknụzụ kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ, ụdị dị iche iche iji kwado mkpa niile, atụmatụ dị ukwuu na iji ụdị ngwaike isi (AMD, Intel, NVIDIA, WD, …), wdg.
O nwere ike iyi na imewe na imecha nke ngwaọrụ ndị a abụghị nke kachasị mma, ma ekwela ka ikpe ahụ duhie gị. N'ime ị nwere ike ịhụ otu nnukwu ìgwè enweghị aesthetic "frills" na ha na-agbalị ikpuchi erughị eru ndị ọzọ. Ọ na-enye gị ihe ị chọrọ n'ezie na ọ nweghị ihe ọzọ nwere ike ịgbakwunye na ọnụahịa ya.
Hụ echiche anyị maka akwụkwọ ndetu Acer
Ọ bụ ika German ahaziri maka ndị na-achọ ihe na-arụ ọrụ na ọ dịghị ihe ọzọ. Ezigbo ụdịdị kọmpụta dị mma mana enwere ike itinye ya n'etiti ndị dị ọnụ ala. N'adịghị ka laptọọpụ dị ọnụ ala, n'ihe banyere Medion, ọ nweghị ihe a na-eleghara anya ma ọ bụ na ha agaghị enwe ngwaike ọgbọ ochie dị ka ndị ọzọ.
Nwere ike akwa nhọrọ maka ndị na-achọ kọmputa dị mfe maka iji ụlọ, laptọọpụ maka teleworking, maka ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ dị ka kọmputa nke abụọ. Ọ ga-enye gị ohere ịzụta ihe karịrị ngwaike dị mma, nwere nnukwu atụmatụ na ihe niile ụdị laptọọpụ ndị ọzọ na-enye, mana na-echekwa ego.
Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara nkwado nke Lenovo, ebe ọ bụ na ọ bụ ya kemgbe 2011, nke na-enye gị ohere ịlele mmasị nke akara ndị China na-eweghara mpaghara Europe a nke nwerelarị. 30 afọ ahụmahụ na ezigbo ọrụ, karịsịa na mba ndị dị ka Germany, ebe ọ bụ onye isi ahịa.
Na nkenke, ihe ọhụrụ, àgwà, ọrụ na ọnụ ala dị ala bụ ụfọdụ n'ime ihe nkiri ya iji mee ka ndị ahịa gị kwenye. Ozughị gị?
Hụ echiche anyị maka laptọọpụ Medion
Ibu Microsoft Ọ bụrụla otu n'ime ụdị Apple ọzọ, maka ndị na-achọ sistemu kachasị mma, ngagharị dị elu (nnwere onwe dị oke mma, kọmpat na ọkụ), nnukwu arụmọrụ yana ọmarịcha mma. N'ezie, a na-arụ ụka na ọ bụ otu n'ime ụdị kachasị mma maka ndị na-achọ ngwá ọrụ azụmahịa ọkachamara.
Otu ndị a na-abụkarị mgbanwe ma ọ bụ 2-in-1, na-enye gị ike na ịdị mma nke laptọọpụ, yana ntụgharị nke mbadamba ihe, na-eji Pen Surface ma ọ bụ ihuenyo mmetụ. Ihe kachasị mma nke ụwa abụọ n'otu ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ọma yana Windows 10 sistemụ arụmọrụ zuru oke, na-enweghị ihe mgbochi.
N'ịbụ onye sitere na Microsoft, ọ nwere ọrụ dị iche iche ejikọtalarị ma ọ bụ arụnyere ya nke ọma, nke nwere ike inye aka dị ukwuu maka ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara. Dịka ọmụmaatụ, jiri Otu Microsoft, OneNote, nweta uru nke windo ndewo nche (mmapụta ihu), ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ nke ụdị Pro nke Windows 10.
Hụ echiche anyị maka laptops Surface
Ọ bụ akara ndị China nke obere akụrụngwa na-ewu ewu. Isi uru ya bụ ọnụ ala ya dị ala, na mgbakwunye na nhazi mara mma. N'ezie, Chuwi pụtara dị ka clones nke ngwaahịa Apple. Ọbụna aha ndị otu a yiri nke akara Cupertino. Ya mere, ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya imewe na ịdị mma, ha nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ.
Nnwere onwe ya dịkwa mma, na elu nke ndị asọmpi ndị ọzọ, àgwà ahụ dịkwa mma, na Ihuenyo gị nwekwara ike ịbụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị, na iji IPS panel nwere mkpebi dị elu. Ihe siri ike ịchọta na ụdị dị ọnụ ala nke yiri nke a.
Ịrụ ọrụ nwere ike ịbụ ikiri ụkwụ Achilles kasị ukwuu, ebe ọ bụ na ha na-egosipụta ibe ọgbọ ochie. Ya bụ, ha anaghị enwekarị ndị nrụpụta ọgbọ ọhụrụ. Nke a nwere ike bụrụ nsogbu maka ndị na-achọ oke arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ihe assimilable maka ndị na-achọ ngwá ọrụ bụ isi na-enweghị itinye ego buru ibu.
Hụ echiche anyị maka laptọọpụ Chuwi
Huawei bụ onye ọzọ nke teknụzụ teknụzụ jisiri ike wepụta niche na ahịa dabere na a nnukwu ihe ohuru na ngwaahịa ya niile. Ngwá ọrụ ha nwere ntụkwasị obi dị ukwuu na ịdị mma, n'ịdị elu nke ndị ukwu. N'ezie, ha nwere ụdị kachasị mma na ọgbọ ọhụrụ nke ngwaike, iji nye gị arụmọrụ kachasị.
Na mgbakwunye na nhazi ya nke ọma, ọ bụkwa na-ezochi ọtụtụ ihe ịtụnanya na ị gaghị enwe ike ịchọta ngwa ngwa na ngwá ọrụ ndị ọzọ, yana ihe dị ntakịrị maka ọnụ ahịa ndị a. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta teknụzụ NFC maka njikọta na ụfọdụ ngwaọrụ mkpanaka na wearables, nke bụ uru doro anya karịa ndị ọzọ na-enweghị ya. Ha na-abịa n'onwe ha nwere ihe mmetụta Ụlọ Nzukọ iji chọpụta ọnụnọ nke magnetik na ụlọ ha na mmemme dị iche iche.
A na-enwekwa ekele maka obere nkọwa ndị a na-enwe ekele, dị ka Huawei Share, ọrụ iji jikọọ ekwentị mkpanaaka nke otu ika site na Bluetooth 5.0 ma ọ bụ WiFi Direct wee kesaa ihuenyo, rụọ ọrụ mkpanaka na keyboard na òké iji jikwaa ngwa ndị ahụ ozugbo, wdg. Nkọwa ndị ọzọ na-eme ka ọ dị iche bụ ihuenyo ya nke na-enweghị etiti ọ bụla, ihe mmetụta mkpịsị aka mkpisiaka, ma ọ bụ kamera webụ ya nwere ike iweghachi, maka nzuzo na nchekwa ka ukwuu.
Hụ echiche anyị maka laptọọpụ Huawei
N'ime afọ abụọ gara aga, Dell na-eduzi chaatị ịre ahịa laptọọpụ, nke a bụ n'ihi na nnukwu nkwalite nke ọrụ enyemaka aka ya na ọnụ ọgụgụ dị elu enwetara na ule. Ọ bụ ezie na na ngwanrọ na ọkwa ọhụrụ, akara ahụ anọgidewo na-adị n'okpuru ndị asọmpi ndị ọzọ, ndị ọrụ na-enwe ekele maka nsonaazụ ha nwetara.
Dell na-enye ngwakọta nke aghụghọ na nke bụ isi. Ma ọ bụ laptọọpụ 14-inch ntinye ọkwa ma ọ bụ nnukwu laptọọpụ 18-inch ị na-eso, Dell emeriela obi ndị ọrụ site na arụmọrụ ya dị elu yana ahụmịhe dị elu.
Ọ bụ otu n'ime ụdị ndị ahụ na-enye ahụmịhe mpịpị mara mma., nke a na-anabata nke ọma mgbe ị na-eji ọtụtụ awa ede ihe ma ọ bụ mmemme. Na mgbakwunye, Dell Alienware na-enye ọmarịcha egwuregwu egwuregwu ekele maka ahụigodo ọkụ na nnukwu mkpịsị aka.
Ụdị laptọọpụ DELL kacha mma bụ:
Maka ndị n'ime gị nọ na mmefu ego mana bụrụ onye na-akwado DELL, ọ nweghị ihe nwere ike imeri Dell XPS 13 a, nnukwu nhọrọ. Isi ihe dị mma ya bụ ndụ batrị ya, ọ dịghị ihe na-erughị awa 14, nke na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe nlereanya maka ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'èzí ụlọ ọrụ na maka iji kwa ụbọchị.
Ọ nwekwara atụmatụ dị obere na nke dị ọkụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-eme njem ugboro ugboro ọ ga-abụ ezigbo enyi njem.
Ọ bụ ezigbo ihe nlereanya maka ndị egwuregwu, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha, anyị ji n'aka na ị ga-eji ya. Site na chassis ya mara mma, ogo ọdịyo bara ụba, ọkụ nwere ike ịhazi ya, yana ngosipụta dị egwu, ị na-azụta ahụmịhe egwuregwu dị elu. Na mgbakwunye, ọ nwere 9 GHz Intel Core i2,9 CPU na 16 GB nke RAM na Nvidia 2080 eserese.
Alienware 17 - Kọmputa ...
Ị nwere ike lelee anyị ntụnyere nke laptọọpụ egwuregwu.
DNN Latitude 5450
Ọ bụ ihe nlereanya na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, dị mma maka azụmahịa ndị nwere ihe mara mma na nke pụtara ìhè. Laptọọpụ dị inch 13 a na-enye mkpuchi mmetụ dị nro iji mee ka nkwojiaka gị dị jụụ mgbe ị na-ede akwụkwọ. Na mgbakwunye, ihe nlereanya a na-adọrọ mmasị n'ime dị ka ọ dị n'èzí, ihe atụ nke a bụ ngwa ngwa Core i5 processor na ihuenyo HD zuru ezu.
Ọ na-abịa na 16GB nke RAM, 256GB SSD draịvụ ike, yana Windows 10 PRO.
Hụ echiche anyị maka laptọọpụ Dell
Ikekwe ọtụtụ n'ime unu na-eche ihe kpatara o jiri were ogologo oge, mana Toshiba emechaala nweta ọkwa n'etiti ụdị laptọọpụ kacha mma nke 2021.
Agbanyeghị na anyị debere ya nke isii, Toshiba nwetara nyocha dị egwu n'afọ gara aga. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka laptọọpụ rụọ ọrụ, ị nwere ike ịtụle kọmputa ha dị ka etiti, mana Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ onye ọrụ nwere mkpa dị mfe, ị ga-ahụ na ha dị mma maka ịdị mfe iji ha.
Ọzọkwa, Laptọọpụ egwuregwu Toshiba nwere a nnukwu aha ekele ekele ya magburu onwe ngosi, otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị na ahịa.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọnụ ahịa ndị ahụ yiri ụdị ndị gara aga nke anyị depụtara, ma ọ bụrụ na ị ga-ahọrọ laptọọpụ anyị na-akwado ndị gara aga, mana anyị depụtara ụdị kachasị ewu ewu nke ika ahụ.
Ụfọdụ kacha mma Ụdị laptọọpụ Toshiba nwa:
Qosmium X75A na-elekarị anya dị ka laptọọpụ egwuregwu, ihe nlereanya a nwere ngosipụta kachasị ọhụrụ, ike dị ukwuu, yana àgwà ụda dị egwu. Na mgbakwunye, ọmarịcha ahụigodo ya na ọmarịcha imewe emewo ka a mara ya dị ka otu n'ime ndị kacha mma laptọọpụ maka egwuregwu Site n'ahịa. Maka laptọọpụ egwuregwu siri ike, gaa maka Qosmio.
Satellite P55t: Nke a bụ laptọọpụ 15,6-inch nke na-ejikọta teknụzụ kachasị ọhụrụ na nhazi dị ịtụnanya. Ọ nwere ahụigodo dị mma yana ihuenyo mmetụ mara mma na-erughị 1000 euro. N'ihe niile, ọ bụ nnukwu ihe maka ndị na-achọ njirimara ọkọlọtọ, maka ụmụ akwụkwọ, na maka ndị ọrụ chọrọ laptọọpụ na-adịgide adịgide.
Akwụkwọ Kira- Ọ nwere nchikota nke lightness na thinness nke MacBook Air na ihuenyo nke MacBook Pro, ma nke a Ultrabook adịghị edozi maka nke ahụ site n'inye nhọrọ mmetụ ike na Apple enweghị. Laptọọpụ adịchaghị mma a dịkwa mma, ọ nwere ndụ batrị nke awa 7 yana SSD 256 GB.
Kedu ụdị ụdị laptọọpụ kacha mma?
Anyị ahụworị nke bụ ụlọ ọrụ laptọọpụ kacha mma N'ime akụkọ a dum, Otú ọ dị, enwere ọmụmụ afọ ojuju onye ọrụ nke a na-enyocha isi ihe dị iche iche iji mee mkpebi ikpeazụ.
Ahịa maka laptọọpụ sara mbara nke ukwuu, na nnukwu nhọrọ nke ụdị na ụdị. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ụdị na-ejikwa na-apụta n'elu ndị ọzọ, ekele maka àgwà nke ngwaọrụ ha. Mgbe ahụ, anyị na-ahapụrụ gị ụdị ndị a kacha mma dịka otu ha si dị:
N'onyinyo nke i nwere n'elu ahịrị ndị a ị nwere ike ịhụ ndị bụbu nke kacha mma nke 2021 Dabere na njirisi ndị eburula n'uche echiche nke ndị ọrụ na ndị ọkachamara, nhazi ahụ, nkwado nke ika ahụ na-enye, ogo nke ihe ọhụrụ na-enye site na laptọọpụ, uru ya maka ego na nkwa.
N'iburu n'uche ihe niile dị n'elu, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ụdị Laptọọpụ kacha mma bụ:
N'ezie, ọkwa a dị oke n'ozuzu ebe ọ bụ na na nke ọ bụla n'ime ụdị ndị gara aga enwere ngwaahịa dị mma ma ọ bụ dị njọ, ya mere ọ dị mma ịme ọdịiche ebe ọ bụ na enwere ike ịnwe laptọọpụ Lenovo nwere echiche dị mma maka ndị ọrụ imewe mana nke ahụ na-anakọta nyocha ọjọọ. na ngalaba egwuregwu.
Ọzọ anyị ga-ahapụrụ gị nhọrọ nke ụdị kacha mma dị ka ojiji na anyị ga-enye laptọọpụ.
Kacha mma maka imewe
Ọ bụrụ na ị bụ onye mmebe eserese, laptọọpụ gị ga-enwerịrị ọtụtụ ihe achọrọ iji rụọ ọrụ gị nke ọma. Ya mere, n'okpuru ị nwere ike ịnweta ndepụta nke ụdị laptọọpụ ndị na-enye ụdị na-elekwasị anya pụrụ iche na imewe ma ha na-enye ogo ihuenyo dị oke egwu yana kaadị eserese dị ike iji rụọ ọrụ na Adobe suite na mmemme mmeghari ngwa ngwa ndị ọzọ.
N'akụkụ a, ịkụ nzọ na Apple bụ ndakọrịta na arụmọrụ dị mma na mmemme imewe kachasị ama.
Hụ laptọọpụ maka imewe eserese
Ụdị kacha mma maka ụmụ akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, e nwere ụdị laptọọpụ ndị na-enye akụrụngwa dị ọnụ ala na ikike zuru oke iji nwee ike idetu ihe ma ọ bụ rụọ ọrụ kọleji, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum.
Lelee laptọọpụ ụmụ akwụkwọ
Ụdị nke kọmputa na-arụ ọrụ
N'akụkụ a, anyị ga-eburu n'uche na ịrụ ọrụ, oge anyị bara uru ego. Site na nke a anyị na-ekwu na ịrụ ọrụ anyị chọrọ laptọọpụ a pụrụ ịdabere na ya nke na-adịghị enye anyị nsogbu na nke na-enwe obere mmezi ka oge na-aga ebe ọ bụ na oge anyị na-efunahụ n'imezi mmejọ, ka ego anyị ga-efunahụ site n'enweghị ike iji ya dị ka anyị. ngwá ọrụ ọrụ.
N'akụkụ a, echiche anyị doro anya na anyị kwadoro Apple o Lenovo dị ka otu n'ime ụdị ndị a tụkwasịrị obi na kọmpụta kọmputa.
Ụdị laptọọpụ inch 13 kacha elu
Ọ bụrụ na ị na-achọ Laptop 13 inchN'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụdị kachasị mma nke na-apụta maka ịdị arọ ha na akụkụ dị ala mana na-enweghị ịchụ àjà:
Hụ laptọọpụ inch 13
Nke kacha mma 15 sentimita asatọ
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a dịtụ ibu kọmputa na-eri nke ịchụ àjà arọ na size, echefula nhọrọ nke top 15 inch laptọọpụ ụdị.
Hụ laptọọpụ inch 15
Laptọọpụ kacha mma igwu egwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu n'ezie nke ga-ebu laptọọpụ gị ebe ọ bụla ka ọ nwee ọ enjoyụ egwuregwu ahụ na ogo eserese kacha elu, enwere ụdị dị ka MSI na-elekwasị anya na ọha. onye egwuregwu.
Nke nke egwuregwu laptọọpụ na-eto ngwa ngwa, na ọtụtụ ụdị dị na ahịa. Ọ bụ akụkụ nke asọmpi na-eto, mana ebe enwere ụdị ụfọdụ ị maara na-enye gị ọrụ kacha mma mgbe niile:
Msi: Ụlọ ọrụ si Taiwan bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma anyị na-ahụ na mpaghara ahịa a. Ha nwere ụdị kọmpụta egwuregwu dị iche iche, nke pụtara ìhè maka ịdị mma ha pụrụ iche. Na mgbakwunye, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụdị, ọ ga-ekwe omume ịchọta nhọrọ maka ụdị egwuregwu ọ bụla.
ASUS: Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ laptọọpụ, ebe anyị nwere ọtụtụ ụdị egwuregwu. Ọtụtụ n'ime ha nọ na ezinụlọ ROG, n'agbanyeghị na ha nwere oke. Ogo, ike na ezigbo uru maka ego na-echere anyị na nke a.
HP okwu: Nke a bụ ọnụ ọgụgụ nke laptọọpụ egwuregwu si na nnukwu kọmputa. Anyị nwere nhọrọ dị mma nke ụdị, nke na-adaba mgbe niile na ndị a kwadoro na mpaghara ahịa a. Ha nwere ihe niile anyị tụrụ anya na kọmpụta ndị a.
Acer: Akara ọzọ a ma ama na ahịa laptọọpụ, nke nwere oke egwuregwu zuru oke, ebe anyị nwere ike ịchọta nhọrọ ole na ole na-adọrọ mmasị, nke ga-enye ọrụ dị mma mgbe niile.
Ụdị nwere laptọọpụ inch 17
Ọ bụrụ na ị bụghị onye na-egwu egwuregwu mana ọ na-amasị gị na kọmpụta nwere nnukwu ihuenyo, anyị akwadola nhọrọ nke laptọọpụ kacha mma ị nwere ike ịzụta yana nke ejiri ihuenyo diagonal 17 inch mara:
Hụ laptọọpụ inch 17
Kachasị mma nwere laptọọpụ ndị na-agbanwe agbanwe
na Laptọọpụ na -agbanwe agbanwe ma ọ bụ 2 n'ime 1 aghọwo ihe ejiji maka ọdịdị ha. Ọtụtụ nwere ike ije ozi dị ka mbadamba nkume mgbe anyị nọ n'ụlọ ma gbanwee ghọọ ezigbo laptọọpụ Windows mgbe anyị ga-arụ ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị chọrọ ngwa zuru ezu na Windows.
Hụ kọmpụta ndị nwere ike ịgbanwe agbanwe
Site na ndepụta nke anyị gosipụtara ugbu a, anyị ji n'aka na ị ga-enwe ike ịhọrọ akara laptop kacha mma maka mkpa, ebumnobi na mmefu ego gị. Obi abụọ adịghị ya, anyị na-akwado ka ịzụrụ dị ka ihe ị nwere si dị, n'ihi na maka àgwà nke ụdị niile a tụlere ebe a, ọ dịghị ọtụtụ ihe ị ga-ekwu, ha niile bara uru, ma ị nwere ike ileba anya na ntụnyere anyị. nke uru kacha mma maka laptọọpụ ego Ọ bụrụ na ịchọrọ ikpebi otu ma ị maghị nke.
Anyị na-atụ anya na na ozi niile anyị hapụrụ gị na post a, ị nwetala nke ọma karị ihe laptọọpụ ịzụta.
Ụdị laptọọpụ kachasị ntụkwasị obi
Enwere ọtụtụ ụdị na-emepụta ma na-ere laptọọpụ. Ụbọchị ndị a àgwà dị ukwuu, n'ihi ya, ọ na-esiri ike ịsị na e nwere ụdị ndị dị njọ ma ọ bụ ndị na-enweghị ntụkwasị obi. Mana enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ na-apụta nọgide na-enwe àgwà kwụsiri ike n'ime afọ, na-arụ ọrụ nke ọma mgbe niile:
Apple: Ikekwe otu n'ime ụdị ndị a kacha mara na ere n'ụwa niile. Ha na-ahapụkarị anyị ọtụtụ laptọọpụ kwa afọ, dị mma maka ndị ọkachamara na ndị na-emepụta ọdịnaya mgbasa ozi. Ogo, ntụkwasị obi, nchekwa na ezigbo ọrụ bụ igodo ya. Ọ bụ ezie na ha bụ ndị kasị ọnụ.
HP: Akara ọzọ a ma ama na mpaghara ahịa a, ikekwe otu n'ime katalọgụ laptọọpụ kachasị na ahịa. Anyị nwere ike ịchọta ihe niile n'echiche a, maka mmefu ego niile, mana mgbe niile na ngwaahịa dị mma.
Lenovo: A ika nke jisiri ike na-eto ngwa ngwa n'ahịa, na ezigbo laptọọpụ, na a karịa na-adọrọ mmasị uru maka ego, nke ịrụ ụka adịghị ya na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ụdị na kwesịrị iburu n'uche na ahịa.
ASUS: Ụdị àgwà ọzọ, nke nwere laptọọpụ na akụkụ dị iche iche, ọ bụghị naanị egwuregwu. Ọ bụ akara nke pụtara maka inwe ọnụ ahịa dị mma, n'agbanyeghị na àgwà ngwaahịa ya dị elu karịa nke ọtụtụ ndị asọmpi na ahịa.
Ụdị laptọọpụ ndị China
China bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe taa. N'ihi ya, ọtụtụ ụdị apụtala na mba ahụ, nke a na-ararakwa nye mepụta laptọọpụ. Ọtụtụ n'ime ha na-apụta maka ụdị àgwà dị iche iche, nke kachasị mmasị:
Lenovo: Ọ bụ otu n'ime ụdị ahịa kacha ere n'ụwa. Laptọọpụ dị mma nke nwere ọnụ ahịa dị ọnụ ala, bụ otu n'ime nnukwu igodo nke ụlọ ọrụ a. Ya mere, ọ bụ akara nke kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-azụrụ ihe ọhụrụ.
Huawei: Amara maka smartphones ya, akara ndị China nwekwara ụdị kọmpụta dị iche iche, nke a maara maka MateBook ya. Ọ bụ oke nke na-eto eto nke ukwuu, ebe ha na-ahapụ anyị na laptọọpụ dị mma, na ọnụ ahịa na-adọrọ mmasị.
Xiaomi: Ụdị ọzọ a ma ama maka ekwentị ya, nke na-emekwa laptọọpụ. Ha nwere oke nke toro, nke anyị nwekwara ike ịzụta na Spain, na ụlọ ahịa nke ha dịka ọmụmaatụ. Ọ dị ọnụ ala karịa ụdị ndị ọzọ, nke na-eme ka ha nwee mmasị.
Chuwi: Ọ bụ ezie na aha ya yiri iju ma ọ bụ obere mara gị, nke a ika nke laptọọpụ ndị China Ọ ghọọla onye na-ere ahịa kacha mma maka uru ọ bara maka ego.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Ụdị laptọọpụ kacha mma
43 kwuru na "ụdị laptọọpụ kacha mma"
Ọktoba 2017-06 na elekere 25:1 nke abalị
M ga-azụta laptop na m nọ n'etiti abụọ ndị a, achọrọ m ịma nke ị ga-akwado m.
toshiba satịlaịtị c55-c-189, i3 5015u, 4GB ebulu, intel hd 5500 eserese.
Akwụkwọ ndetu HP 15-ac-134ns
i3, 5005u, 8gb ebule, eserese amd radeon r5 2GB
Ọktoba 2017-06 na elekere 25:3 nke abalị
Kedu maka Fernando. Mụ onwe m na-ahọrọ HP, mana m na-ahapụkwa m ka e jiri ya mee ihe, sistemụ arụmọrụ, wdg. Echere m na nke a bụ nhọrọ nke naanị gị nwere ike ime 😉
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:2 nke ụtụtụ
Ndewo, ọ ga-amasị m echiche gị gbasara mmalite eon 15xpro, amabeghị nke ọma mana ọ bụ otu n'ime ole na ole nwere ezigbo 3.4 GHz processors ebe ekwenyeghị m na nkwalite turbo.
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:7 nke ụtụtụ
Kedu ka Javier na-aga? Ọ bụ ihe nlereanya na-amasị m nke ukwuu n'agbanyeghị na ọ bụ ihe nwute na ugbu a ahụghị m ya na ụlọ ahịa Spanish. Echere m na naanị nhọrọ bụ ịzụta ya n'aka America. Echere m na ọ bụ ihe nlereanya gbadoro ụkwụ n'ịgba egwuregwu n'ihi na ọ bụ ezie na ngwaike o nwere dị ọkụ, ọ naghị ahụ ya dịka i kwuru. Ọ dị m ka ụfọdụ n'ime ihe ha na-ekwu bụ na batrị bụ otu n'ime njirimara kachasị njọ o nwere, ebe ọ bụ na àgwà a na-akwụ ụgwọ dị ukwuu ... N'okwu a na ike. Ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mma, m ka na-edebe ụfọdụ ụdị nwere ihe niile karịa ọkwa hehe 😉
Ọktoba 2017-06 na elekere 16:1 nke abalị
Ọ bụ eziokwu na ndị nrụpụta AMD na-ekpo oke ọkụ?
Ana m eche n'etiti i3 5005 na AMD Quad Core A8 7210
Ọ bụ ezie na ajụjụ ọnụ nwere ike ịbụ Kedu ihe ị na-akwado maka akpaaka ụlọ ọrụ, ịntanetị maka euro 400?
Ajụjụ ọzọ m hụrụ i7 maka 500 ọ bara uru ịkwụ ụgwọ dị iche maka ihe m chọrọ ya?
Ọktoba 2017-06 na elekere 19:2 nke ụtụtụ
Kedu ihe ị chere gbasara akara laptop Acer? bụ na ma eleghị anya, o kwesịghị ịbụ ọnọdụ na ndepụta a, ọ bụrụ otú ahụ, nye m echiche gị banyere ya n'ihi na n'onwe m echere m na acer kwesịrị ihe ọ bụla n'ọnọdụ a ma e wezụga ha, ha na-eme ezigbo ụdị laptọọpụ na-eguzogide ọgwụ, onye ọ bụla nwere echiche ha ma. Ọ ga-amasị m ịma echiche gị gbasara ya.
Ọktoba 2017-06 na elekere 19:7 nke ụtụtụ
Obi abụọ adịghị ya na ọ kwesịrị ya, ma ị bịarutere naanị mgbe m na-emelite Alejandro, nke m na-eme na ngọngọ n'ihi na m na-eji ozi ahụ kpọrọ ihe ma na-ahọrọ m ibipụta ya mgbe ọ gwụchara ma ọ bụghị ọkara 🙂 Dị ka nchịkọta m nwere ike. gwa gị na Acer bụ ika nke afọ 5 gara aga agaghị m atụ aro ya, ebe ọ bụ na m gbalịrị otu ụzọ ogologo oge na ha dị ọkụ nke ukwuu yana àgwà nke nyere ọtụtụ ihe a chọrọ ... Ma ugbu a, batrị ndị ahụ. etinyela ya ma ị nwere ike ịchọta akwụkwọ akụkọ ultrabooks pụtara ìhè zuru oke maka ịchọgharị, ọ nweghị ihe na-anyaụfụ maka akwụkwọ chromebook dịka ọmụmaatụ. N'ime ụbọchị ole na ole m hapụrụ ya bipụtara, ekele.
Albert Echeghị m na ị ga-achọpụta ọdịiche dị na i7 ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya maka ngwa ụlọ ọrụ n'ụzọ nkịtị, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa iji 100 euro ndị a karịa na nke a. N'etiti AMD Quad Core A8 7210 na i3 5005 echere m na onye mmeri ga-abụ i3. N'iji ha abụọ atụnyere, ụdị nhazi a dị iche na AMD maka eserese agbakwunyere yana maka uru nke ihe ị na-akwụ.
Ọktoba 2017-06 na elekere 31:2 nke abalị
Enwere m nsogbu siri ike na mkpa nke ụmụ nwanyị 2 m (ụmụ akwụkwọ na n'oge na-adịghị anya ga-abụ ụmụ akwụkwọ kọleji) na nwunye m.
Abịara m nkwubi okwu na ha niile chọrọ ọdụ ụgbọ ala nke ha, m pụtara, 3 ozugbo.
Ọrụ ha ga-enye akụrụngwa ha agaghị agabiga ihe ndị bụ isi. Chọgharịa, mụọ akwụkwọ na ọrụ eserese na-adịkarịghị (enweghị egwuregwu) ..
Anaghị m agwa gị mmefu ego n'ihi na ị gaghị enwe ahụ iru ala .. M na-arụ ọrụ naanị ya na izu na-abịa nwunye m ga-ejikwa nkwekọrịta oge na-adịghị agwụ agwụ .. Hallelujah !!!!
Achọrọ m ịma nhọrọ kacha mma maka otu ndị ahụ, ọ bụghị ihe karịrị € 1.000 ... ọ bụghị ịkọ kredit ...
4 GB Ram na 500 Gb opekempe diski ike .. Ha nwere ike ịga mahadum oge ụfọdụ.
Ọ bụghị ihe m chọrọ, ma ọtụtụ ihe karịa m nwere ike .. Ọ bụrụ na ọ pụrụ ịbụ, M ga-enwe ekele maka azịza nke onwe m email… Daalụ.
… Ah, ka m dokwuo anya. € 1.000 maka 3 !!
Ọktoba 2017-06 na elekere 01:3 nke abalị
Kedu maka José, ọ bụghị ara dị ka ị nwere ike iche. Ọ bụrụhaala na laptọọpụ bụ maka nchọgharị na akpaaka ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị na-adịghị achọsi ike n'ihe gbasara mmefu ego. Lelee ntụnyere anyị nwere gbasara akwụkwọ Chrome. Ị ga-ahụ na e nwere ụfọdụ ụdị ndị dị gburugburu € 300 ma dị ka m na-ekwu, gụọ nke ọma na nke a bụ ihe ị na-achọ. Atụla anya ka ezinụlọ gị dezie nnukwu vidiyo na ihe ndị yiri ya na ha hehe Ọ bụ ihe m na-akwado maka ndị ọrụ na-achọ naanị inye ya ihe ị kwuru. M na-agwa gị, na dị ukwuu RAM na ebe nchekwa dị ka ị na-ekwu na ị gaghị ahụ ihe ọ bụla, Otú ọ dị, i nwere ike iku ebe nchekwa na ígwé ojii na-ekere òkè ya. M na-ekwu ya dị ka echiche. Echiche kacha mma
Ọktoba 2017-06 na elekere 20:11 nke abalị
Ndewo, echere m ịtụ kọmpụta ma ọ bụ onye ntụgharị 2 na 1 maka ụbọchị ọmụmụ m. Anọ m na-eche ihe ga-aka mma, mmefu ego m ga-abụ 300-400 euro.
Ị nwere ike ịkwado m ihe?
Ọktoba 2017-06 na elekere 21:7 nke ụtụtụ
Kedu maka, lee anya na ntụnyere anyị 2 n'ime 1 laptọọpụ. Enwere nhọrọ ole na ole na mmefu ego ị nwere. Enwere m olileanya na ọ bara uru!
Ọktoba 2017-06 na elekere 01:6 nke abalị
Ana m atụle ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ ma ekpebighị m n'etiti Dell ma ọ bụ Toshiba, mmefu ego m dị n'etiti € 800 na € 1000 (VAT inc), ihe na-eme karịsịa bụ na amaghị m ma ịzụrụ ihe nhazi i5 ma ọ bụ M, ebe ọ bụ na ozi Ọ bụ nnọọ diffous na nke a (m maara na M bụ nke ala oriri kamakwa na uru), isi ojiji maka ngwaọrụ ga-arụ ọrụ na mebere igwe, ụlọ ọrụ akpaaka na vector imewe. N'aka nke ọzọ, m na-atụle ịchọ ihe nwere diski siri ike (50% nke ozi a na-echekwa na igwe ojii ma ọ bụ na igwe mebere) na 8 Gb nke RAM gbasaa (laptọọpụ ikpeazụ m Toshiba sallite pro U bụ 10). afọ ma dị na ikpeazụ)
Adịghị emechi m na ụdị ndị ọzọ (acer mba, site na Chineke), ọ bụrụhaala na mkpokọta ịdị arọ (laptọọpụ na eriri) agaghị agafe kilogram 2.5, ọkacha mma ihuenyo mmetụ, ọkachamma 13-14 ″
Ọktoba 2017-06 na elekere 03:4 nke abalị
Kedu maka Antonio, nke mbụ daalụ maka ịdenye aha site na izipu okwu. Kpọọ m ihe dị egwu mana m hụrụ n'anya na ndị ọrụ dị ka gị na-enye ọtụtụ nkọwa, ị na-eme ka ọ dịrị m mfe ịchọta ihe nlereanya 🙂 Eziokwu bụ na site na ihe ị gwara m na ị nwere ụfọdụ nhọrọ dị mma. N'ime ndị ahụ m nwara n'aka nke m na m ga-akwado maka ihe niile ị na-ekwu, ọ ga-abụ Dell Inspiron 7359 (ebe a ị nwere ezigbo onyinye). Naanị ihe ọ na-akwadoghị bụ na draịvụ ike siri ike, ọ bụ ngwakọ (SSHD) mana ọ ka na-agba ọsọ karịa nke nkịtị ma ọ bụrụ na ọ bụ SSD ọnụahịa ahụ ga-arị elu ntakịrị. Nke ọzọ m tụlere bụ Dell XPS9350, mana nke a emelarị anyị na € 1600. Echere m na nhọrọ nke mbụ sitere na ihe ị gwara m ga-adabara gị mma dịka uwe aka. Ekele!
Ọktoba 2017-06 na elekere 06:4 nke abalị
Achọrọ m ịzụta laptọọpụ nke ga-abụ maka ezinụlọ dum. Ebe ọ bụ na anyị nwere 1 (Sony Vaio SVF1521N6E) nke na-aga nke ọma na obi dị m ụtọ nke ukwuu mana ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ anyị chọrọ karịa 1. Anyị ga-achọ ya maka akpaaka ụlọ ọrụ bụ isi okwu,…. na-echekwa foto ezinụlọ na site n'oge ruo n'oge a video nwere foto ezinụlọ, dị ka ndị m na-eme site n'oge ruo n'oge na sony na m nwere ike mfe, (na ike director mmemme).
Ụmụ m nọ n'ụlọ akwụkwọ na otu na mahadum, ya bụ, ọ ga-abụ maka ọrụ, ... na kwa ịfụgharị ịntanetị, lelee ihe nkiri (site na HDMI cable) ...
A kwadoro m Asus mana amaghị m ihe m ga-eme.
Elelela m ụdị Asus ndị a wee gwa m nke m ga-achọ.
-ASUS F554LA-XX1152T - Laptọọpụ 15.6 ″ (Intel Core i7-5500U, 4 GB Ram, 500 GB HDD Disk, Intel HD Graphics 5500, Windows 10),
ASUS F554LJ-XX531T - Laptọọpụ 15.6 ″ (Intel Core i7-5500U, 8GB Ram, 1TB HDD Disk, NVIDIA GT920M 2GB, Windows 10),
ma ọ bụ ikekwe ọ dị oke.
Ego m na-emefu bụ karịa ma ọ bụ obere ihe ruru euro 600.
Ọktoba 2017-06 na elekere 06:11 nke abalị
Ndewo Juan Rafols
Enwere m mkpa ịzụta laptọọpụ ọhụrụ, ebe ọ bụ na mgbe ahụmahụ ọjọọ m na Toshiba c855 21M gasịrị, ọ tara ahụhụ na-enweghị atụ, nke mere na ọ na-esiri m ike iji ya ọzọ n'ihi na ihe oyiyi dị na ihuenyo na-apụ na m ga-emegharị nke a. ka o wee laghachi n’ịdị adị ya. Ọnụ ego m nwere ike ime bụ gburugburu 450-500e. Ojiji bụ iji rụọ ọrụ okwu, Excel na jikọọ na ịntanetị na obere ihe ọzọ. N'ezie, ọ dị m mkpa na ọ nwere ndụ batrị dị mma, na ọ na-ejikọta ngwa ngwa, na-ebufe ibe ngwa ngwa. 14 inch ka mma, ma ọ bụrụ na ọ bụ ọmụmaatụ 15,6 ọ ga-adịkwa m mma. Ọ ga-amasị m ka ị kọwaara m ụdịdị maka na ọ bụ ụbọchị ọ bụla, nke m na-ahapụ m ịgha ụgha na m ga-aga ịzụta otu na ụdị dịgasị iche iche nke dị na ịntanetị na ụlọ ahịa na na m lere anya ihe, m naanị jisiri ike mee ka isi m bụrụ ihe na-adịghị mma . Ikekwe, ọ na-ahapụ m obi abụọ na inkwell na na ugbu a na-ede ihe m na-adịghị mkpa ikwu banyere ha.
Ọktoba 2017-06 na elekere 07:10 nke ụtụtụ
Kedu maka Javi, daalụ maka ịkwụsị na ịhapụ ọtụtụ nkọwa. Ị ga-ahụ na mbụ na-agwa gị na anyị nwere Akụkọ a nke na-ekwu maka laptọọpụ ụmụ akwụkwọ mana n'ezie enwere ike iji ya mee ihe maka ebumnuche ndị ọzọ, mana a na-eche na ha dị ọnụ ala yana akpaaka ụlọ ọrụ nwere ike. Ọ bụrụ na ị doro anya na ịchọrọ otu n'ime Asus ị kwuru, ndị a ga-enye gị nha mana nke abụọ dị oke ma ị na-emefu € 600. Kama nke mbụ ị ga-enwe ihe karịrị ezuru ma ị nwere ike zụta ebe a na-enye ihe karịrị € 500. Site na ihe ị gwara m na ị gaghị enwe nsogbu ọrụ yana maka mgbanwe, ịzụrụ ihe na-abụghị Sony ga-adị mma 🙂
Ndewo Maria! Aghọtara m ka nke a si na-akụda mmụọ site na onyonyo ihuenyo. Nke bụ eziokwu bụ na ihe yiri a HP mere m na m ga-mgbe niile na-akpali ya ruo mgbe m chọtara ihe ziri ezi ... Total, m ezi uche lara ezumike nká ya. Ihe m ga-akwado maka ojiji ịchọrọ ịnye ya na mmefu ego bụ laptọọpụ ụmụ akwụkwọ m nyochara na ya nkebi a. Ị ga-ahụ na e nwere ndị ọzọ kpọmkwem ụdị nke dị iche iche ụdị na ịnyagharịa na ide na ndị ọzọ ga-abụ zuru okè maka gị. The sentimita asatọ si na 13 ruo 15, ọ bụ ezie na ị gaghị achọpụta ọdịiche dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-eji 14 hehe Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ, egbula ịza ajụjụ na ngalaba ahụ, m ga-eme ike m niile.
Ọktoba 2017-06 na elekere 07:8 nke abalị
Daalụ maka azịza gị, ma m ga-abụ nkenke karịa laptọọpụ, kpọmkwem, ị ga-akwado m maka mmefu ego nke nwere ike ịgbatị ruo 600e ka ọ ghara ịkwa ụta ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, n'ihi m. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, kedu laptọọpụ ị ga-azụta ma ọ bụrụ na ị na-echeghị echiche ọzọ ma nwee ego ahụ. Ọ bụ nke m, dị ka m na-ekwu, ihe oyiyi ahụ na-apụ, na m ga-emegharị ihuenyo ahụ ka m gbanwee. Ọ bụ nsogbu! Ọzọkwa, enwere m mmasị na okwu ahụ onye injinia kọmpụta dị ka gị nwere ike inye m karịa ndị na-achọ ịre laptop na nke nwere naanị echiche bụ isi, mana amaara m ihe dị mma na ihe na-adịghị, ebe ahụ ka m ga-esi ree. nweta 🙂
Ama m na m na-echefu ihe, Juan. Zaa m nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụrụ na ị na-atụle na ọ dabara n'ime isiokwu. Banyere laptọọpụ aka nke abụọ, m na-atụlekwa ohere dị ka macbook sitere na 2008, emelitere yana maka ọnụ ahịa 350e. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị kwadoro ịzụrụ ngwaahịa ndị a nke abụọ n'ihi ihe ize ndụ nke na ha na-agụnye ịzụrụ n'aka onye ọbịbịa n'ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụ na-atụfu ego n'ihi na ọ na-akụda ma emesịa bụrụ ọnụ ala, ọnụ
Ọktoba 2017-06 na elekere 07:11 nke abalị
Ndewo, ụtụtụ ọma/ehihie ma ọ bụ mgbede.
Achọrọ m ịjụ ajụjụ.
Maka ụbọchị ole na ole, achọrọ m ịzụta laptọọpụ ọhụrụ, enwere m Acer Aspire 5742G-7200 nke dị ihe dị ka afọ 5 ma ọ bụ 6.
Kedu laptọọpụ ị ga-akwado m? (ọ bụrụ na ọ nwere ike ọ gaghị adị oke ọnụ n'ihi na enweghị m nnukwu mmefu ego)
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ, ekele.
Ọktoba 2017-06 na elekere 08:4 nke ụtụtụ
Ndewo, a na m agụ post gị ma ọ dị m mma nke ukwuu, ọ ga-amasị m ịjụ gị ajụjụ, abụ m nwa akwụkwọ injinia na m na-achọ ịzụta akwụkwọ ndetu na m nọ n'etiti 2, n'ezie 4, 2 wee tụfuo ịhụ ụzọ. post gị ... Echiche gị ga-enyere m aka nke ukwuu.
Kedu maka Eduard. Ebe ọ bụ na ị naghị ekwu ọtụtụ ihe na ihe ịchọrọ, a ga m akwado ka ị nyochaa ụdị laptọọpụ ịchọrọ site na mmefu ego na nkọwapụta, anyị na-eji ntụnyere anyị nwere na menu 🙂
Ndewo Gastón, ọ bụrụ na ị doro anya na ịchọrọ akwụkwọ ndetu nwere windo, ana m akwado ilele ntụnyere anyị (ị ga-ahụ ya na menu) na anyị na-ekwu maka ha.
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:12 nke ụtụtụ
Ndewo Juan Rafols, daalụ maka inyere ndị ọrụ aka.
Ị hụrụ, enwere m n'etiti € 700 na € 850 ịzụta laptọọpụ nke ga-etinye DVD na ihe niile yana nke nwere ezigbo ihuenyo 15,6 ″ HD na nke ahụ na-enye m ohere ịme obere ihe osise na Photoshop na ntinye vidiyo. ,… enwere laptop nke ị maara? M ga-enwe ekele maka enyemaka gị… Ọ na-agba m ara ịgụ nyocha….
Ọktoba 2017-06 na elekere 11:4 nke abalị
Ndewo, maka imewe eserese a na m akwado gị ndị a si ebe a. N'ime kọmpụta ndị anyị kwuru banyere ya ebe ahụ, ị ​​​​ga-ahụ na HP Envy na-ere ere (jiri njikọ ahụ) ma na-efu ntakịrị karịa mmefu ego o nwere mana echere m na ọ bụghị nnukwu ego ịnweta. E wezụga ụdị ahụ dị ezigbo mma 🙂 Aghọtara m ilele ọtụtụ nyocha ... Ịzụta laptọọpụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ ala, ya mere anyị na-emeghe ibe ahụ iji mee ka ihe niile dị mfe. Ka anyị hụ ma ntụnyere na-arụ ọrụ maka gị, ekele!
Ọktoba 2017-06 na elekere 12:7 nke abalị
Ndewo, ezigbo mma, achọrọ m ịzụrụ laptọọpụ ma amaghị m nke ga-akacha m mma
Enwere m mmefu ego nke euro 450 ruo 500
A ga-eji ya eme ihe maka ọrụ ụlọ akwụkwọ, nbudata ihe nkiri na ikiri, na-eme nchọgharị na netwọk mmekọrịta, chekwaa foto, ma eleghị anya na-edezi ụfọdụ, anyị na-aga maka iji ya eme ihe n'ụlọ.
Kedu ihe ị na-adụ m ọdụ?
Kedu maka Xaima, n'ọnọdụ gị, a na m adụ gị ọdụ ka ị lelee menu. Na "ụdị" ị ga-ahụ akụkọ zuru oke gbasara ndị bụ maka ụmụ akwụkwọ. Nke ọ bụla n'ime ụdị ndị ahụ ga-arụ ọrụ maka gị, ị ga-ahụ na ụfọdụ na-emeziwanye na mmefu ego gị. chioma!
Ọktoba 2017-06 na elekere 15:1 nke ụtụtụ
Ndewo Juan ọzọ lol agara m na laptọọpụ ụmụ akwụkwọ ma ahụbeghị m ihe ọ bụla dọtara uche m mgbe ahụ
Ọ ga-amasị m ịma ihe ị chere maka Satellite Toshiba C55 — C JM Windows 10 laptọọpụ 4GB RAM 500 diski ike.
Intel HD ndịna-emeputa njikwa
Maka € 450
Daalụ nke ukwuu, n'ezie, ị bụ nke ukwuu nye m 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 29:8 nke abalị
Ndewo, ọ ga-amasị m ịma ihe bụ echiche gị maka microsoft Surface pro 4, na laptọọpụ nkịtị ma ọ bụrụ na ha karịrị arụmọrụ nke laptọọpụ ọdịnala.
Ndewo Alfredo, na ntụnyere a Anyị na-ekwu maka ndị na-agbanwe agbanwe na ndị nkịtị n'ụzọ zuru ezu, ọ na-arụ ọrụ maka gị ma ị ga-ahụ ụfọdụ ụdị na-adọrọ mmasị 🙂
Ọktoba 2017-06 na elekere 26:11 nke abalị
M ga-azụta laptọọpụ ọhụrụ mana m nọ n'etiti abụọ: Lenovo Yoga 520 ma ọ bụ HP LAPTOP 15-DA0010LA 15.6 ″ CORE I5 1TB 4GB. Kedu nke ị ga-akwado m? M gbakwunye na m bụ nwa akwụkwọ mahadum, m na-eche na ọ nwere ike na na ha bara uru. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume na ha nọ n'etiti euro 600 ruo 700 ebe ọ bụ na nke ahụ bụ mmefu ego m.
Ọ ga-amasị m ịmara echiche gị ma ọ bụrụ na enwere ọnụ ụzọ kacha mma nke dị na gburugburu mmefu ego ahụ. Daalụ!
Daalụ maka ịdepụta ụdị na njirimara kachasị mma nke laptọọpụ.
nke dị n'ahịa maka ụlọ ọrụ, ọrụ na agụmakwụkwọ
Ọktoba 2017-06 na elekere 22:2 nke abalị
Maka imewe eserese, nke ika laptop ị kwadoro, daalụ maka enyemaka gị.
Ndewo Maria Elena,
Anyị nwere amụma amụma maka Apple na MacBook ya. Ha nwere trackpad nwere ezi uche dị mma, nnukwu mbara elu yana nnukwu mmemme Adobe na mmemme eserese ndị ọzọ na-adaba na sistemụ arụmọrụ apụl.
N'ọkwa batrị, ogo ihuenyo na ibugharị, laptọọpụ ole na ole na-aka MacBook na ndị na-eri otu ihe ma ọ bụ karịa.
Ọktoba 2017-06 na elekere 15:3 nke ụtụtụ
Kedu maka ụbọchị dị mma, ana m achọ laptọọpụ m chọtara onyinye maka Acer Aspire 3 nwere ryzen 3 8gb na ram na 1tb nke nchekwa niile maka 7K nwere mbelata 40%, ị ga-akwado m ịzụta ya ma ọ bụ lee anya. maka ihe ka mma m na-agụ na ọ bụ Maka egwuregwu, ọ bụ ezie na echeghị m na m na-eji ya eme ihe, achọrọ m ihe karịrị ma ọ bụ obere ike iji rụọ ọrụ na adobe, mmefu ego m adịghị ukwuu, m ga-enwe ekele maka azịza gị, Daalụ.
Ọktoba 2017-06 na elekere 29:4 nke abalị
Ndewo Nacho Ọ ga-amasị m ịjụ gị ajụjụ, Anọ m n'etiti akara Lenovo ma ọ bụ Asus, ha abụọ bụ otu n'ime njirimara, naanị Lenovo bụ ọgbọ nke asatọ i5 na nke asaa Asus i3. Ha bụ 50-60 euro nke ọdịiche (ka ukwuu). Ma nnukwu ajụjụ m bụ ụdị nke a pụrụ ịdabere na ya. N'otu aka, m na-agụ ọtụtụ ihe na Asus na-adịru ọtụtụ afọ ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya n'ihi na Lenovo nwere ndụ dị mkpirikpi na n'aka nke ọzọ, nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike nye m ndụmọdụ, daalụ nke ukwuu.
Ma Asus na Lenovo bụ ụdị a pụrụ ịdabere na ya mana dị ka ụdị ọ bụla, enwere ụdị njedebe dị ala na ụdị dị elu nke ga-adịru oge ma ọ bụ obere.
Enweghị ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ahụ, a na m akwado Lenovo na i5 ebe ị ga-ahụ ya nke ọma na arụmọrụ. Ọ bụghị naanị na anyị na-ekwu banyere ọgbọ dị iche iche, kamakwa banyere oke.
Ọktoba 2017-06 na elekere 09:3 nke abalị
Enwere m acer abụọ na m na-enye ya okpete maka afọ 10 ma n'ebe ahụ ka ha na-alụ ọgụ, mgbe dell akwụsịghị m ọbụna afọ 3 ... na m nwetara ha nke abụọ bụ ikwu na ha ka bụ okenye. , karịa Dell nke ahụ dị ọhụrụ, ọ bụ ya mere o ji ju m anya ịhụ na ọ bụ ebe abụọ dị n'okpuru Dell, ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche na àgwà nke laptọọpụ 10 afọ gara aga abụghị otu taa na ha kwesịrị. Ha na-eme kọmpụta "gamer" na ha na-agbaji kwa abụọ na atọ ...
Ọktoba 2017-06 na elekere 09:1 nke ụtụtụ
Nnọọ! Ọ ga-amasị m ịma ka akara acer si dị mma
Achọrọ m ịzụta laptọọpụ acer, mana amaghị m ka ọ si arụ ọrụ
Akara akwụkwọ ndetu Acer abawanyela nke ukwuu, ọ dịghịzi ka afọ 10 ma ọ bụ 15 gara aga nyere nsogbu zuru oke n'ime obere oge. Ha bụ kọmpụta arụrụ arụ nke ọma ugbu a, nwere ngwaike dị mma yana ezigbo uru maka ego.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe niile dabere na ụdị ị ga-ahọrọ ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile ka ewuru na-agbaso otu ụkpụrụ ahụ.
Achọrọ m kọmputa ọhụrụ na m na-agba ara; M na-eche na ịzụrụ otu taa bụ ihe mgbagwoju anya karịa ịzụ ụgbọ ala ... M na-akụzi asụsụ na-eji kọmputa na-arụ ọrụ na mebere klaasị, videoconferences, e dere ede mmezi online ... Onye ọ bụla gbara m gburugburu na-agwa m na-erughị ihe I7, 16 GB nke RAM, ọgbọ nke iri na otu… Amaghị m. Achọrọ m kọmputa nke na-arụ ọrụ nke ọma na ọ naghị ajụ oyi, nke a pụrụ ịdabere na ya kwa ụbọchị ma na-adịgide ruo afọ ole na ole na-enyeghị ọtụtụ nsogbu, na ụda dị mma na ihuenyo nwere mkpebi dị mma na nke na-elekọta ya. anya (M ga-agafe ọtụtụ awa n'ihu ya) na 15 sentimita (m dịtụbeghị mgbe 13 ma ọ bụ 14 sentimita asatọ na, a priori, ha na-eme m obere obere). Enwere m mmasị na Lenovo, Dell (ọ bụ ezie na agụọla m okwu ọjọọ banyere ọrụ ha na-ere ahịa mgbe ha chara, Asus (ha na-ekwukwa nke ọma banyere ha) na ndị Apple (n'agbanyeghị echere m na ihe m na-achọ ga-efu m na , Ọzọkwa, Amaghị m ihe ndakọrịta nsogbu m nwere ike inwe na ihe nke ụmụ akwụkwọ m na-ezitere m) Ego ole ka m chọrọ imefu? M nwere ike imefu otu puku euro ma, ebe ọ bụ na enweghị m ego fọdụrụ, ọ dị mkpa iji. na-emefu ya ka ịchọta ihe m na-achọ? M ga-eme ya naanị ma ọ bụrụ na ọ bara uru. Ị nwere ike iche maka otu ụdị ma ọ bụ oke? Daalụ n'ọdịnihu maka nzaghachi gị na enyemaka ị na-enye ndị ọrụ, dị ka m, bụ furu efu ma na-erukwa isi ara. daalụ nke ukwuu.
Nhazi nke ha tụrụ aro ka ọ dị mma maka kọmpụta ga-anọru gị afọ ole na ole. Ikekwe ugbu a ị nwere ike ijikwa laptọọpụ dị ala karịa, mana n'ikpeazụ, ị ga-achọ processor dị ike karị ma ọ bụ nwee RAM karịa.
Ana m akwado ndị MSI nke oge a, nke na-ejikọta ike na ibugharị n'otu ngwaọrụ ahụ. Ha bara uru.